အင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုမှုများအတွက်သိကောင်းစရာများ - သင့်ပြောပြီအင်္ဂလိပ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်! | USAHello | USAHello
အင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုမှုများအတွက်သိကောင်းစရာများ - သင့်ပြောပြီအင်္ဂလိပ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်!
သငျသညျအင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုမှုမှာပိုကောင်းရချင်ပါနဲ့? သငျသညျလုပျနိုငျကိုအကောင်းဆုံးအရာအလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်, လေ့ကျင့်သည်, နှင့်ပိုပြီးအလေ့အကျင့်! သင်သည်သင်၏အင်္ဂလိပ်တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်အချို့သောနည်းလမ်းတွေရှာမည်.
သင် USA တွင်တစ်ဦးမျက်နှာသစ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, အင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုမှုသင်လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏နေ့စဉ်အသက်တာ၌အမေရိကန်တွေနှငျ့ဆကျသှယျဖို့လိုအပ်. အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တို့ကိုလည်းအလုပ်တစ်ခုရဖို့ကူညီပေးပါမည်, လေ့လာချက်, နှင့်အခြားကျွမ်းကျင်မှုလေ့လာသင်ယူ.
ကအရေးကြီးဆုံးသောကွောငျ့ဤသည်ပထမဦးဆုံးအစွန်အဖျားဖြစ်ပြီး. အင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုမှုများစွာသောအခြားအမှုအရာနှင့်တူ၏. သငျသညျနေ့တိုင်းနည်းနည်းပြုလျှင်, သငျသညျပိုကောင်းလိမ့်မယ်. သငျသညျမေးခွန်းတစ်ခုတစ်ခုသို့မဟုတ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ အသုံးပြု. လေ့လာသင်ယူအသစ်တစ်ခုထားသောစာပိုဒ်တိုများသို့မဟုတ်စကားလုံးလေ့ကျင့်.
ပိုငျသညျပွောဆို, ပိုကောင်းသင့်အသံထွက်ပါလိမ့်မည်. သင်တို့မူကား Self-သတိခံစားနေကြမယ်ဆိုရင်, သင်အမြဲပြောနိုင်, "ကြှနျတေျာ့အင်္ဂလိပ် excuse ကျေးဇူးပြု.. ကျွန်မအင်္ဂလိပ်သင်ယူသူဖြစ်ကြောင်းကို."လူအများစုကလူနာနှင့်အမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်.
သင်သည်သင်၏နေ့စဉ်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုအနည်းငယ်စာပိုဒ်တိုများလေ့လာပါ. သငျသညျပွငျဆငျနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျမေးခွန်းများမေးသို့မဟုတ်ဖြေဆိုဖို့ပိုပြီးဆန္ဒရှိပါလိမ့်မည်. သင်လုပ်နိုင်သည် Englishspeak အပေါ်အများအပြားအင်္ဂလိပ်စာပိုဒ်တိုများကြားဖတ်.
သငျသညျအင်္ဂလိပ်လေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုသင်၏လုပ်ဖော်ကိုပြောပြပါ. သူတို့ကိုစကားများနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုမေးပါ, သငျတို့သအမှားတွေလုပ်အခါသင်ပြင်ပေးဖို့သူတို့ကိုမေးဖို့.
သင့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူနှင့်အင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုလေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်. သငျသညျအစားအစာများမှာအတူတူအခါအစားသင့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကား၏အင်္ဂလိပ်စကားပြောကြိုးစားပါ. သင်၏သားသမီးတို့သည်ကျောင်းတွင်အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူစေခြင်းငှါ. သူတို့ကိုအင်္ဂလိပ်စကားပြောနှင့်သူတို့အိမ်စာလုပ်နေသဖြင့်သူတို့ကိုအားပေးပါ. သင်တို့ရှိသမျှသည်ပိုမိုလျင်မြန်စွာသင်ယူပါလိမ့်မယ်.
သငျသညျရေဒီယိုနားမထောင်သည့်ပြောပြီအင်္ဂလိပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှု, တီဗီသည်, သငျတို့သအများပြည်သူထွက်ဖြစ်သည့်အခါ.
သင်အချိန်ရှိပါက, စေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်ဖို့အပတ်တိုင်းတစ်နာရီသို့မဟုတ်နှစ်ခုပေး. သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးအကြောင်းမရှိမှသင်၏အချိန်လှူဒါန်းနိုင် - မျက်နှာသစ်သားသမီးတို့အဘို့တခု afterschool ကလပ်, ဥပမာ, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုအသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်ဘယ်မှာ. သို့မဟုတ်သင်ဒေသခံတစ်ဦးအစားအစာစားစရာခန်းသို့မဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်းမီးဖိုချောင်မှာအစားအစာကိုပွငျဆငျသို့မဟုတ်အစေခံနိုင်မည်. ဤအရာအလုံးစုံသောနေရာများမှာ, သငျသညျကလူစကားပြောနှင့်သင့်အင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုမှုကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါ Merriam Webster သင်ယူသူအဘိဓါန် အထူးသဖြင့်အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူလူများအတွက်အွန်လိုင်းမှအဘိဓါန်ဖြစ်ပါသည်. သင်ကဆိုသညျကားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ကအဘိဓာန်ထဲမှာရှိသမျှစကားလုံးကိုနားထောင်ခွင့်ပြု. အဆိုပါက်ဘ်ဆိုက်လည်းရှိပါတယ် 75 ပြီးပြည့်စုံသောအသံထွက်များအတွက်လေ့ကျင့်ခန်း. နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလုပ်ပါ.
တခါတလေ, အမေရိကန်တွေကိုသင်နားလည်အံ့သောငှါစကားများပြောပါ, ဒါပေမဲ့သူတို့အတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုဆိုလိုတာ! အချို့သောလေ့လာပါ နားလည်ရန်အသုံးဝင်ကြောင်းဘန်းစကား အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုမှုများအတွက်.
များစွာသောအခမဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုမှုအတန်းနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တခြားအင်္ဂလိပ်အတန်းရှိပါတယ်. သင်၌ရှာဖွေနိုင်ပါတယ် FindHello သငျသညျအနီးလူတန်းစားများအတွက်. သင်၏ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပါ, သင့်ရဲ့မြို့သို့မဟုတ်လိပ်စာရိုက်ထည့်, ပြီးတော့ပညာရေးကို select & အင်္ဂလိပ် Classes ရဲ့.
သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်ကိုရှာဖွေ သူတို့အခမဲ့ညနေပိုင်းသို့မဟုတ်နေ့ခင်းဘက်စကားပြောဆိုမှုအတန်းရှိပါကမေးဖို့. ဒါမှမဟုတ်သင့်မှာတောင်းဆိုနိုင်ပါသည် ဒေသခံစာကြည့်တိုက်. တချို့ကအလုပ်အကိုင်အစင်တာများဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်အင်္ဂလိပ်အတန်းရှိ. သင့်ရဲ့အနီးဆုံးအလုပ်စင်တာကိုရှာပါ.
သင်တစ်ဦးလူတန်းစားရခဲသည်ဆိုပါက, အင်္ဂလိပ်အွန်လိုင်းသင်ယူမှုကိုစတင်ရန်. သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် mobile device တစ်ခုခုအပေါ်လုပျနိုငျအများအပြားအွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွေရှိပါတယ်. သူတို့ထဲကအတော်များများဟာအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်စကားပြောလေ့ကျင့်ဖို့ခွင့်ပြု.
သငျသညျဘာသာစကားတစ်ခုကိုဖက်တက်သည်လက်မှတ်ထိုးနိုင်မည့်အွန်လိုင်းဝဘ်ဆိုဒ်များရှိပါတယ်. သငျသညျစပိန်သင်ပေးလို့ရပါတယ်, ဥပမာ, သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်သင်အင်္ဂလိပ်သွန်သင်စဉ်. အဆိုပါစကားပြောချိန်း သင်သည်သင်၏ဧရိယာနှင့်လည်းချက်တင်ဆော့ဖ်ဝဲကိုသုံးပြီးအကွာအဝေးမိတ်ဖက်များအတွက်လူတို့အဘို့ရှာဖွေခွင့်ပြု. Italki ဆရာ, ဆရာမများနှင့်ကျူရှင်ဆရာများသည်ပေးဆောင်ထားပြီး, ဒါပေမယ့်လည်းအခမဲ့စကားပြောမိတ်ဖက်များစာရင်းကိုရှိပါတယ်. သင်သည်သင်၏အီးမေးလိပ်စာတွေနဲ့ sign up ကို အကယ်., သငျသညျအောကျဘာသာစကားမိတ်ဖက်စာရင်းကိုရယူနိုင်ပါလိမ့်မည် "ရပ်ရွာ။ " သင်အထိန်းတစ်ဦးရရှိရန်ဆုံးဖြတ်မဟုတ်လျှင်သင်ဟာလစာဘာမှမှမလိုအပ်ပါဘူး.
သင်စကားပြောဆိုမှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းနားလည်မထားဘူးဆိုရင်, ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးသူတို့ကဆိုပါတယ်ဘယ်အရာကိုပြန်လုပ်ပါရန်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမေးရန်အဆင်ပြေပါကဖြစ်ပါသည်. သငျသညျဖြည်းဖြည်းချင်းစကားပြောဆိုရန်သူတို့ကိုတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်, လွန်း. အင်္ဂလိပ်၌ဤမေးရန်, ပြော, "ကိုယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ပိုမိုနှေးကွေးစွာပြုလုပ်ပြန်လုပ်ပါလိမ့်မယ်? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။"
သငျသညျဖမ်းရလျှင်အမြန်ဘာသာပြန်ချက် system ကိုသုံးပါ
သငျသညျလျင်မြန်စွာအင်္ဂလိပ်မှသို့မဟုတ်စကားလုံးအသစ်ဘာသာပြန်ဆိုရန်အဘို့အနညျးလမျးမြားစှာလည်းရှိပါတယ်. သင်တစ်ဦးအဘိဓါန်သို့မဟုတ်ထားသောစာပိုဒ်တိုများစာအုပ်ကိုသုံးနိုင်သည်. သင်တို့သည်လည်းအွန်လိုင်းအဘိဓါနျသုံးနိုငျ. Google Translate ကိုသင်စကားလုံးများနှင့်စာကြောင်းဘာသာပြန်ဆိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟု website တစ်ခုနှင့်မိုဘိုင်း app ဖြစ်ပါတယ်. သင်စမတ်ဖုန်းရှိပါက, သင်သွားလေရာရာ၌သင်သည်လည်းသင်၏ဖုန်းတွင်လုပ်ဖို့နိုင်ပါလိမ့်မည်! သငျသညျကြိုးစားနိုင် Google ကအွန်လိုင်း Translate. သို့မဟုတ်သင်လုပ်နိုင် Google အက်ပ် Translate ကို download လုပ်ပါ.
သင့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်န့်အသတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျအခြို့သောအခြေအနေများတွင်စကားပြန်များအတွက်မေးမြန်းဖို့အမေရိကန်ဥပဒေအောက်တွင်တစ်ဦးအခွင့်အရေးရှိသည်. ဆေးရုံများနှင့်ဆရာဝန်များ '' ရုံးများစကားပြန်ပေးရမညျ. ဒါကြောင့်မဖြစ်မနေဥပဒတရားရုံးများ. သင်ကလိုအပ်တယ်ဆိုရင်သင့်ကလေး၏ကျောင်းကသင်ရေးသားပြောပြီအင်္ဂလိပ်နှင့်အတူဘာသာစကားအကူအညီများပေးသင့်. ဒါကြောင့်သင်ဆဲအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာသင်ယူနေလျှင်, သေချာသင်အရေးကြီးသောအင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုချက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်စေရန်စကားပြန်တောင်း. သင်တို့သည်လည်းထွက်ရှာတှေ့နိုငျ အခမဲ့ဘာသာပြန်ချက်အကူအညီရရန်မည်သို့.
အရွုံးမပေးနဲ့. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်ပိုမို Give. မကြာမီ, သင်သည်သင်၏စကားပြောဆိုမှုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်သင်ပြောနိုင်အားလုံးအသစ်ကစကားနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်!
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန် – အွန်လိုင်း ESL
Florence Phillips က '' အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများ, အကူအညီနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအောင်မြင်ဖို့